Wɔn a wɔnyԑ Yehowa Adansefo bio no Osuahu – 4Jehovah (Yehowa)
Category: Wɔn a wɔnyԑ Yehowa Adansefo bio no Osuahu
NANCY OSUAHU- Sεnea Ɔwεn Aban Mmarahyε εfa Mogya Wͻtwe Gu Nipaduam Haw N’abusua
Mebεyεe Yehowa Adansefo no mu biako denam me maame a na ͻyε Yehowa danseni bere a meyε abofra no. Me maame yεe obi a ohyia mmofraberem mmͻnnaato εnna Yehowa Adansefo kuw yi bae ne nkyεn wͻ pon ne pon ano asεnka, maa wͻhyεε ne nkuran sε obetumi anya anidaso. Nanso nea ͻsom yi de brεε yεn bεyε mfe aduanan a atwam ni no, de mpapaemu baa m’abusua mu εne m’awofo a wogyae aware bεyε mfe 24 atwam. Me maame wͻ mma anan. Yεn mu baasa awiei koraa no, guanee fii afie ma yegyinae me maame ͻpoo ano bεyε mfe bi. Me nuanom barima abien guanee ansa na εbaa wͻn tirim sε wobekum wͻnho εnna Me nso mefii ahyehyεde no mu afe ne fᾱ bere a me kunu wui esiane Ɔwεn Aban mmarahyε a εbarae mogya wͻtwe gu nipaduam no nti. Me nua panyin no anka ͻyε akum neho ansa ͻtwee neho fii m’abusua ho koraa. Me nuabarima ͻfoforo nso agyina mmarima ne mmarima adapaade ano, na wotuu no fii ahyehyεde no mu a ͻne yεn mu biara ankasa. Na me nua kumaa werε howee maa anka okͻkum neho εno akyi ansa awiei koraa ofii Ahyehyεde no mu. Continue reading “Nancy Osuahu”
Author WebmasterPosted on August 19, 2013 May 8, 2014 Categories Wɔn a Woafi More, Wɔn a wɔnyԑ Yehowa Adansefo bio no OsuahuTags Ayaka, Hyɛ akomfo, Matemeho somkuw ne adwenem Tumidi, Mogya a wɔtwe gu Nipaduam, Tu a Wotu Obi
Author WebmasterPosted on March 30, 2013 March 30, 2013 Categories Wɔn a wɔnyԑ Yehowa Adansefo bio no OsuahuTags 144000 Kuw a Wɔasra wɔn, Nipakō Yesu Kristo yɛ, Paradise ne Ahenni no